Sarin-kisoa Voasivana Tao Malezia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2014 22:29 GMT
Fantatsika fa voarara ny fihinanana kisoa ho an-dry zareo Miozolmana; fa tsy azon-dry zareo jerena koa hoe ny kisoa ?
Orinasa iray mpanonta printy ao Malezia no mihevitra fa heloka koa ho an'ireo Miozolmana ny mahita sarin-kisoa izay nahatonga azy handray fanapahankevitra samirery hanamainty ny mokom-bavan'ireo kisoa roa nivoaka tao amin'ny fanontàn'ny “International New York Times” tamin'ny 22 Janoary 2014.
Ireo sary ireo dia nanaingoana ny lahatsoratra iray nitondra ny lohateny hoe “Mitombo ny tinady amin'ny kisoa any ivelany”.
Ny sary “nohamaintisina” niteraka resabe, izay nivoaka tao amin'ny fanontàn'ny New York Times Maleziana. Sary avy amin'ny tranonkala “The Malaysian Insider”
Nilaza ny mpitondra tenin'ny “KHL Printing Co” fa efa fomba fanaon-dry zareo ny mandrakotra ireo sary “voarara” any amin'ireo firenena be mpino Miozolmana, toy ny sary miboridana, ny fifohana ary ny fitaovam-piadiana. Saingy nolavin'ny governemanta Maleziana ny hoe manana fepetra mandràra ny famoahana sarin-kisoa izy. Tsy nahalala koa mikasika ilay fanapahan-kevitra hanamainty ireo sary ireo ny New York Times.
Tamim-bazivazy no nanehoan'ireo Maleziana hevitra mikasika ilay raharaha saingy maro no gaga sady menatra. Nampanahy an'i anak1malaysia ny hoe any aoriana dia mety tsy ho fantatr'ireo taranaka intsony hoe toy inona ny endrik'izany kisoa izany:
Azoko vinaniana sahady ato anatin'ny hoavy tsy dia lavitra manao ahoana, tsy ho fantatry ny olona intsony hoe toy inona no atao hoe kisoa. Ary mety ho zava-doza izany raha toa ny ankizikely miozolmana ka mety hisafosafo kisoakely satria tsy mahafantatra akory noho izy tsy mbola nahita izany tany aloha, na dia tany anaty boky fianarana aza.
Mihevitra i Shawn Tan fa fiantraikany miiba nateraky ny fanivànan-tena io:
Kolontsain'ny fanivànan-tena io satria tsy misy olona maniry ny hikorontan-tsaina izany. Indrindra fa ny fandraharahana, dia hiezaka hisoroka izay mety ho fisavoritahana. Ento mora e!
Nampahatsiahy an'ilay orinasa mpanonta printy i Mediha fa tsy heloka akory ny mijery kisoa :
Tsy heloka ny mijery kisoa. Ny mihinana azy no heloka, ary ilaina ny midio raha sanatria nahakitika. Dondrona
Diso entin'ny fihetsehampo loatra ve isika? inona koa ny manaraka ? ny soratra hoe kisoa ?
Tsy vao voalohany izao no nisy sary nohamaintisina teny anaty gazety. Nampahatsiahivin'i Kilgore ny fomba nanaovana “fanamaintisana” tahakahaka izany tamin'ilay lahatsoratra iray mikasika ny ‘hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny fifanorohana’ tany Shily :
Tany amboalohany, nilaza tantara iray momba ny “hetsi-panoherana tamin'ny alalan'ny fifanorohana” nataon'ireo mpianatra Shiliana ny New York Times. Tsy hafa fa ireo olona ireo ihany no nanivana ny sary tamin'ny alàlan'ny fametahana boaty kely mainty isaky ny vavan'ireo mpianatra nifanoroka efa ho an'arivony maro satria niara-natombok'izy ireo ny oraka nataony.
Nanao tahiry indray ny vahoaka Maleziana. Tsara fandaniana ny volan'ireo mpandoa hetra